बाबुरामले प्रचण्डलाई भनेः कलियुगका कृष्णको लिला अपरम्परा छ !
ARCHIVE, POLITICS » बाबुरामले प्रचण्डलाई भनेः कलियुगका कृष्णको लिला अपरम्परा छ !
यतिबेला प्रचण्ड चुनावी प्रचार अभियान लिएर मधेसमा छन् । उनले आफु मधेसका लागि सवैभन्दा बढि लडेको बताउँदै फेरी पनि मधेसका लागि लड्ने बाचा गरिरहेका बेला भट्टराईले उनीप्रति ब्यङगे गर्दै कलियुका कृष्णको संज्ञा दिएका छन् ।
मतदात रिझाउन दाहाल रौतहटमा भन्ने कान्तिपुरको समाचार शेयर गर्दै भट्टराईले यस्तो टिप्पनी गरेका छन् । उनले चुनावका बेला मात्र मधेसँग प्रचण्डले लभ गर्ने, कमिशनका लागि एनसेल, गेजुवा र चुडामणिसँग मिलेको आरोप समेत लगाएका छन् । - एस काठमाडौँ